Nhau - Fungisisa pane simba, simbisa kumberi | Lesite 2020 musangano-wekupedzisira musangano.
Chitubu chakadzoka, nyowani inotanga kune zvese. Bhero reGore Idzva rakarohwa, uye mavhiri enguva akasiya chakadzika mucherechedzo. Iyo yakaoma uye inovimbisa 2020 iri kure, uye iyo inotarisira uye ine hukasha 2021 iri kuuya. 2021 haringori chete gore idzva reLesite, asiwo chapupu chemakore gumi nemashanu ekusimudzira. Musi waNdira 30, 2021, Lesite General Manager Lin Min, pamwechete nevakuru vekambani nevashandi vese, vakaongorora maitiro ekusimudzira egore rapfuura uye vakatarisira chiratidzo uye zvinangwa zvegore idzva.
Shanda pamwe chete kugadzira kubwinya - - Kutaura kwaMutungamiri
Pamusangano wekupfupisa kwegore, VaLin vakaita ongororo yekupfupisa kubva pazvinhu zvekusimudzirwa kwebhizimusi, kuronga kwemakore mashanu, mhando yechigadzirwa uye manejimendi e5S, manejimendi manejimendi manejimendi manejimendi uye manejimendi. Mutungamiri Lin vakati 2020 ichave iri rinoshamisa gore. Takatarisana neakasarudzika nyowani korona pneumonia denda, yakatarisana neyakaomarara uye inochinja bhizinesi nharaunda, uye yakatarisana nemakwikwi anotyisa emusika, Lesite ichatarisa pakudzivirira kwechirwere uye mashandiro ebhizinesi. Vashandi vese vakabatana, simbisa chivimbo chavo, chinhu chimwe chete, vakunde matambudziko, vanyatso kudzidza nekuronga, gadziridza kugadzirwa nekushanda sangano nenzira inokodzera, kuunganidza simba uye kushingairira kwezvinhu zvese zvekambani, uye chengetedza kuchengetedzwa kwe " denda rekudzivirira "uye kugadzirwa nekushanda kwekambani. Yakadzikama uye yakarongeka kukura, uye yakagonesesa mibairo.
2021 igore rinotambudza pamabasa akasiyana-siyana ekambani, uye zvakare iri gore rakakosha rekuvandudza kwesimba kwese kwekambani. Zvinotarisirwa kuti madhipatimendi ese haazokanganwe zvishuwo zvavo zvekutanga, kuva akatsiga uye kusvika kure, kuita mabasa nekambani zvakasiyana siyana, uye kuyedza kuita budiriro mukambani muna 2021. Chiratidzo chekushanda kwese, shanda pamwe kuti uwane kuhwina-kuhwina mamiriro, uye kuvaka kugona pamwe chete, uye shanda pamwe kuti ubudirire kupedzisa kambani-yemakore mashanu ekuvandudza zvinangwa.
Gadzira kukosha pamwe chete - Musangano wemubairo
Kutsungirira, shanda chinyararire. Lesite inogona kuzadzikisa mhedzisiro yakadaro mugore rakakosha kudaro ra2020, uye haina kupatsanurwa kubva pabatch revashandi vakakurumbira vanoshingaira, vakazvipira uye vakazvipira. Vanosimudzira hunhu, hunoshingairira, hwakakomba uye hunhu hunofunga nezvebasa ravo, vachizadzisa zvinangwa kazhinji uye zvakare, uye vachizadza munhu wese akavapoteredza nerunako rwavo rwakasiyana.
Gamuchirai vashandi vatsva
Yegumi yegore vashandi
Kunyanya kuzivikanwa kwevashandi
Akanaka zvikwata, varwi veLesite vakakohwa mbiri yavo mukuombera, vachikurudzira vamwe vashandi veLesite kuti vatore izvi semienzaniso, kurwisa neushingi, kuzvizadzisa, uye kugadzira pamwechete kukosha.
Dhirowa yerineni, inonakidza -Makwikwi erombo
Mubayiro wechitatu anokunda
Iyo yapfuura 2020 yakazadzikiswa mune vakabatikana, vanofara kuenda kumberi, vanofambiswa mune ziya rekubatana, pane kubudirira, kuwana, kuvhiringidzika uye kuratidza. Mhedzisiro inogutsa inotipa chivimbo chekuenderera kumberi uye kuramba tichiratidzira uye nekuchinjisa kusimudzira kwedu. Kufamba kwekuvandudza. Muna 2021, vashandi veLesite vakagadzirira kuenda, vachishanda pamwe chete, vazere nekuziva chinangwa che "nhanho diki pagore, danho rakakura mumakore matatu, uye zvakapetwa mumakore mashanu." Chitsauko chitsva mukuvandudza kweLesite!